Donald Trump, bilyaneer, politik, Madaxweyne, USA
Donald Trump John(* 14 June 1946 New York) waa siyaasi Jamhuuriyadda Mareykanka ah iyo 45. Madaxweynaha Maraykanka, oo noqday 20. Janaayo 2017. Wuxuu ku biiray Aqalka Cad ee da'diisu tahay 70 oo ah madaxweynihii ugu da'da weynaa ee ugu taajirsanaawuxuuna sidoo kale noqday ninka ugu horreeya ee xafiiska iyada oo aan khibrad hore u lahayn hawlaha siyaasadeed ama ciidanka.
Musharaxa u tartamaya doorashada madaxweynenimada 2016 ee Xisbiga Jamhuuriga ayaa si rasmi ah u shaaciyay 16. 2015 June ka dib markii ku guuleystay doorashooyinkii horudhaca ahaa oo waxaa u sharaxan xafiiska Madaxweynaha Mareykanka shirweynaha xisbiga July ee Cleveland. Doorashada 8. November 2016 306 ku guuleystay codadka doorashada (marka la barbardhigo tirada loo baahan yahay 270), ku garaacday ay xafiiltamaan ugu weyn, Musharaxa Democratic Hillary Clinton, taas oo ka xisaabnayn 232 codadka doorashada.
Ka hor inta aan xafiiska la galin, wuxuu ahaa Guddoomiye iyo Agaasimaha Hay'adda Trump Organization, oo ka shaqeynaya ganacsiga guryaha. Waxa kale oo ay maamushaa hudheelo badan, casinos iyo koorsooyinka golfaha ee adduunka oo idil. Thanks to show your xaqiiqdaarday The(i.e.Učeň) NBC wuxuu noqday saaxiib saxaafadeed.
Bilihii ugu horeeyay ee uu ka soo laabtay, Trump reversed qaar ka mid ah talaabooyinkii hore ee Barack Obama. Wuxuu ka kicitimay Heshiis Iskaashiga Transpacific iyo Heshiiskii Paris ee Isbeddelka Cimilada. Waxa uu sidoo kale qayb ahaan joojiyay kulaylinta si tartiib ah ee xiriirka US-Cuban. Madaxweyne Trump ayaa magacaabay Neil Gorsuch oo ah xubin sagaalaad oo ka tirsan Maxkamadda Sare. Ka dib markii ay ogolaatay Senatka Maraykanka, 5-na xildhibaannada 4 ayaa dib loo cusbooneysiiyay. Trump ayaa sidoo kale dhigay qayb ka mid ahmamnuucid safarka, taas oo muddo saddex bilood ah ka hor istaagtay muwaadiniinta lix dal oo Muslimiin ah inay soo galaan dhulka Mareykanka, kuwaas oo noqday mawduuc aad u badan. Dadaallada Trump ee ah joojinta ama xaddidaadda barnaamijka daryeelka caafimaad ee ballaaran ee loogu talagalay muwaadiniinta saboolka ah (Obamacare) ayaa ka soo horjeeda is-difaac badan, waxayna ku fashilantay illaa hadda, sababtoo ah mawqifka kala duwan ee dhawratiyaal xisbiyadoodu ka kooban yihiin.
Bishii Maajo, 2017 ayaa ka soo tuuray Agaasimaha FBI James Comey. Wax yar ka dib markii Waaxda Caddaaladda ee loo magacaabay xeer-gaar ah Robert Mueller si ay u baaraan faragelin lagu eedeeyay Ruush in doorashada madaxtinimada ee 2016 iyo xiriirka ka dhexeeya Russia suurto gal iyo iskaashi ee ololaha madaxtinnimada Trump ee.
Asalka iyo qaraabada
Wuxuu ku dhashay Queens, New York, oo ah midka afraad ee shan carruur ah. waxay ahaayeen labadiisii ​​waalid Frederic C. Trump (11 1905 October, New York -.. 25 1999 June) iyo Maryan A. MacLeod (10 1912 May, Scotland -.. 7 2000 August). Aabaheed wuxuu noqday ganacsade weyn oo dhismaha ku leh magaalada New York. Donald Trump's awoowayaashii hore waxay ahaayeen muhaajiriinta Jarmalka ah ee u soo guuray Maraykanka ee 1885. Awoowe Frederic Trump (Trump Friedrich magaca asalka ah) waxa uu ku dhashay tuulo yar oo khamri Kallstadt aagga, kaas oo iska leh gobolka Jarmal ee Rhineland-Palatinate. Magaca awoowe waa Elisabeth Pink. Masiixa. Trump awoowe horay u heleen maal badan oo sida milkiilaha of silsilad ah hoteelada kuwo kale. In Seattle, Washington.
Young Trump wax ka bartay Dugsiga Kew-Forest ee Forest Hills, New York City, Queens. Iyada oo ay dhibaatooyin ka haystaan ​​waxbarashadeeda, waalidkeed waxaa loo diray Akadamiyadda Militariga New York markii ay da'doodu ahayd 13-jir. Halkaas wuxuu ka helay waxbarasho tacliimeed iyo sidoo kale wuxuu ku ciyaaray kooxo kubada cagta kubada cagta Mareykanka iyo kubada kolayga. Laga soo bilaabo tababarka kubbadda koleyga waxaa la siiyay abaalmarinta 1964Abaalmarinta Tababaraha. Kadib wuxuu bartay Jaamacadda Fordham, kadibna wuxuu u wareegay Iskuulka Wharton oo ka tirsan Jaamacadda Pennsylvania. Ka dib markii uu dhamaystiray shahaadada Bachelor ee Dhaqaalaha iyo Maaliyadda wuxuu ku biiray 1968 aabihiis Trump Organization.
In 1977, Donald Trump oo guursatay Ivana Zelníčková. Saddex carruur ah ayaa ku dhashay guurka: Donald Jr., Ivanka iyo Eric Trump.Carruurta ugu da'da weyn, Donald Jr., ayaa ku hadla luqada Czech, sababtoo ah wuxuu xiriir dhow la lahaa awoowe hooyadii hooyadiis hooyadeed. Maadaama 1980 ay sidoo kale si joogto ah u isticmaashay qaybo xagaaga xagaaga ee Zlín.
Tan iyo Abriil 1978, Safaaradda Dowladda Czechoslovak ayaa la socotay xaaskiisa Trump, Ivan. Munaasabaddan, waxa kale oo ay heshay macluumaad ku saabsan ka qaybqaadashada Trump ee siyaasadda Maraykanka-dambe. Waxyaabaha kale, iyada waxaa lagu wargeliyay xiisaha Trump ee u ordaya madaxweynaha Mareykanka ee 1988 iyo 1996.
Donald Trump qudhuu booqday Czechoslovakia ee 1990, markii uu ka qayb galay aabihii aabihiis, Miloš Zelníček, ee Zlín.Donald iyo Ivan Trump oo furay 1992. Sannadka soo socda, Actarka la guursaday ee Marla Maples, oo la socday Tiffany gabadhiisa.Furitaankooda waa ay raaceen 1999. Lix sano ka dib, Trump ayaa guursaday markii seddexaad, iyadoo qaabka iswidishka ah iyo naqshadeeye Melanie Knavs, oo wiilka Barron William Trump u keenay adduunka.
Laga bilaabo xirfad ganacsi
Trump wuxuu bilaabay xirfaddiisa ganacsi ee shirkadda aabaha (Ururka Trump). Si loo bilaabo ganacsi gaar ah, aabihiis ayaa isaga bixiyay amaah hal milyan oo doolar ah.Mid ka mid ah mashaariicda ugu horeeya waxa uu ahaa dib-u-kicinta dhismaha degaanka ee Swifton Village ee Cincinnati, Ohio. Markii Swifton Village loo wareejiyay aabihiis, 6 waxay kasbatay malaayiin dollar ah.
1980 ee New York, shaqadu waxay bilawday inay dib u soo celiso garoonka Wollman Stadium ee Bartamaha Park. Mashruucu wuxuu lahaa qorshe dhismo la filayo oo ah 21. Si kastaba ha noqotee, 1986 xitaa ma dhamaatay, 12 mar hore ayay maalgelisay malaayiin doolar. Trump loo soo bandhigay si ay u qabtaan shaqooyinkaas iyada oo aan magaaladu bixin wax lacag ah. Diidmada ayaa la diiday illaa iyo inta ay ka soo baxday dareenka warbaahinta. Ugu dambeyntii wuxuu helay fursadda, mashruucuna wuxuu dhameystiray hal milyan oo doolar muddo saddex bilood ah, taas oo ku saabsanaa 1,95 750 dollars oo ka yar miisaaniyadda asalka ah.
Dhammaadkii siddeedaad, ayuu soo galay xiisadda dhaqaale. Dhismaha casaankiisa saddexaad, Trump Taj Mahal oo ku yaal Atlantic City (New Jersey), oo laga maalgaliyo badi deynta xiisaha badan, oo aan awoodin inuu dib u bixiyo. Bangiyada iyo bixiyeyaasha ayaa ka luntay boqolaal milyan oo doolar. 50 lahaanshaha hantida khadadka Taj Mahal waa in loo wareejiyo kuwa asal ahaanta ah ee dammaanadda si loo yareeyo culayska dulsaarka iyo waqti dheeraad ah si uu dib ugu bixiyo deynta. Ilaa 1994, wuxuu si weyn u yareeyey deynkiisa shakhsi ahaaneed ee 900 wuxuuna sidoo kale hoos u dhigay deyntii ganacsiga bilyan ee 3,5. 1995 wuxuu ku biiray bakhshiishiisa Trump Hotels & Casino Resorts.
Guul iyo guuldarro
Trump waa Guddoomiyaha iyo Sarkaalka Sare ee Sare (Madaxa Sare ee Sare, Agaasimaha Hay'adda Trump Organization, oo ka shaqeeya ganacsiga guryaha. Trump sidoo kale waa aasaasaha of Trump Entertainment Resorts, taas oo maamushay casinos badan iyo hudheelada adduunka oo dhan. Bishii Oktoobar 2016 wuxuu ahaa Donald Trump's magazine Forbes 499. ninka ugu qanisan adduunka.
Sanadihii la soo dhaafay 1991, 1992, 2004 iyo 2009 waxay ku dhawaaqeen in ay burburiyeen. Labadii shirkadood ee ugu horreeyay waxay la xidhiidhaan hantidiisa Guryaha: Trump Taj Mahal iyo Trump Plaza Hotel. Waqti ka waqti, ayuu naftiisa sheegay in markii uu dhisay casino raaxo leh uu ahaa mid aad u shaki.1994, wuxuu deyn ahaan u kordhay 900 million iyo 3,5 deynta ganacsiga ilaa $ US billion. Waqtigaas waxa uu lahaa inuu iibiyo qaar ka mid ah shirkadihiisa iyo hantida maguurtada ah iyo in uu ka qaybqaato saamigiisa shirkadaha kale. Dib u soo kabashada dhaqaalaha waxaa caawiyay, waxyaabo kale, qandaraasyo faa'iido leh oo loogu talogalay hantida maguurtada ah ee suurtagalka ah inay muujiyaan erayga "TRUMP" iyaga. Bankrote oo ka socda 2004 iyo 2009 ayaa mar kale lala xiriiriyay hantidoodii, oo ay ku jiraan Trump Taj Mahal iyo Trump Hotels & Casino Resorts.
Qaar badan oo ka mid ah mashaariicda ganacsiga ayaa ku guuldareysatay ama lagu baabiiyo -. Tusaale Airlines Trump, University Trump, Trump Magazine, Trump vodka, Trump bisteeki, Trump Mortgage. Project Trump University (2004-2011) sannaddii 2013 ee March 2016 la siiyey xiiso warbaahinta, markii Xeer-ilaaliyaha Guud Eric Schneiderman bilaabay baaritaan, kaas oo ku dhamaaday tallaabada, isaga oo sheegay in dugsiga "hawlan hawlo been abuur, been iyo sharci-darro ah oo gaar ah."Ma ahan jaamacad (magaca waa in la bedelaa mar dambe), laakiin waa barnaamij ka mid ah koorsooyinka dhiirogelinta qaaliga ah oo faa'iido badan u leh kaqaybgalayaashooda.
Mashaariicda kale Trump waa faa'iido -. tusaale ahaan (shirkad mortgage) Trump Financial, Trump Sales iyo Leasing (iibka la degan yahay), Trump International Realty (degaanka iyo ganacsiga real estate), Trump Makhaayadaha, Tag Trump (online search safarka engine), Select By Trump (cabitaanka kafeega badan), cabitaanka Trump (cabniinka tamarta suuqa Israel iyo Falastiin), Donald J. Trump Saxiixa Collection (line dad dhar iyo soo jeedo), Trump Ice (biyo dhalooyin), Trump Golf, Trump Chocolate, Trump Productions (saarka TV shirkada) ama Trump Home (Xarunta Guriyeynta).
Donald Trump ayaa leh dhowr guri oo ku yaal Maraykanka:
dhismayaasha maamulka iyo guryaha
Trump Tower (hal milyan oo doollar 320 dhismo dhererkeedu yahay mid ka mid ah guryaha New York ugu qiimaha badan)
Burburkii World Tower (New York Skyscraper oo lagu abaalmariyay 290 Million Dollar)
40 Wall Street (Dhismaha Dhismaha, dhismaha asalka ah ee 1930 Trump waxaa lagu dayac tiray 1996. Dhismuhu waa 283 m sare wuxuuna leeyahay dabaqyada 72.)
Trump Taj Mahal (qolka khamaarka ee qaybta casino waa midka ugu weyn ee Atlantic City, qaybta hoteelka waxay leedahay qolalka 1250.)
Marka laga soo tago kuwan iyo hantida kale ee Maraykanka ah, Trump - waxaa laga yaabaa in lala wadaago xaaskiisa hore, Ivana Trumpová - sidoo kale waxay leedahay degaan raaxo ah oo ku yaal Florida oo lagu magacaabo Mar-a-Lago. Xaruntan waxa uu ku lahaa Trump on 8. Bishii September 2017 wuxuu amar ku bixiyay inuu baxsado, sida uu ahaa, iyo sidoo kale dhammaan xeebaha bariga ee gobolka Florida iyo Georgia, hanjabay by Hurricane Irma.
Magaca Trump waa dhismaha soo socda ee dibadda:
Trump International Hotel iyo Tower (Toronto)
Hotel Palm Trump Hotel iyo Tower (Dubai)
Trump Ocean Club iyo Tower (Panama City)
Trump Ocean Club Baja Mexico (aan ka fogeyn San Diego)
Donald Trump ayaa loo magacaabay abaalmarinta Emmy oo laba jeer ku guuleystay abaalmarinta filimada (Guriga 2: Lost in New York) iyo jilayaal (Nanny si aad u eegto,Tani waa waqtiga).Waxa uu ahaa marti ah hadalo kala duwan oo muujinaya marar badan. Waxa kale oo uu ka muuqday barnaamijyo kale oo madadaalo ah, sida World Entertainment Entertainment, halkaas oo uu macalin ka ahaa Vince McMahon oo leh milkiilaha ururka.
In 2003 wuxuu noqday soo saaraha fulinta iyo xakamaynta xaqiiqda dhabta ah ee dhabta aharday Theon channel NBC. Mar kasta oo tartankan la baahiyo, koox koox ah ayaa u dagaallamaysay shaqada Trump. Taxanaha horearday TheQaadku wuxuu helay hal 50 000 hal mar, laakiin ka dib guusha barnaamijka, 3 waxaa lagu abaalmariyey malaayiin doolar oo loogu talagalay dhacdo. Ka dib markii taxanaha 10 uu ku daray isku-laabashoAqoonyahanka Celebrityhalkaas oo muusikada ay sameeyeen. Lacagta ay awoodeen in ay ka soo qayb galaan wareeg walba waxay aadeen mashruuc samafal ah oo ay doorteen maamulaha mashruuca kooxda guuleysata. 2007 loogu talagalayarday TheTrump helay xiddig ka mid ah Hollywood Walk of Fame, kaas oo la jabiyay dhowr jeer.
Kursi ka dib guusha guushaarday Thewuxuu noqday soo saaraha guud iyo mashaariic kale sida Miss America iyo Miss Universe oo lagu tartamayo oo sidoo kale laga sii daayay telefishanka NBC.
Ka dib markii uu ku dhawaaqay dalab madaxtinimada ee la door ka mid ah Jamhuuriga galay hogaanka, Trump gaadhay in warbaahinta ka badan ayaa aad u daran, caadi ahaan dhowr wareysiyo maalin. Waxa uu helo meel bannaan oo aad u badan iyo waqti in warbaahinta, ma aha oo kaliya inta u dhaxaysa Jamhuuriga, laakiin dhammaan murashaxiinta madaxweynenimada. Wararka saxaafadda ayaa la xiriira Donald Trump eego dhagaystayaasha aad u soo jiidasho, iyo wixii la mid ah warbaahinta news tudhin markii Nagi isaga, taas oo uu ka helay Qolyihii boos lacag la'aan ah muujiyaan aragtidooda, uu heli karo laftiisa cod-badan oo go'aansan. Guud ahaan, waxaa la qiyaasay in qiimaha boos warbaahinta isaga si "free" bixiyo (sida soo horjeeda xayeysiis waayo, taas oo yeelan doonta in ay bixiso heerka ganacsi) lacag 1,9-2,0 billion dollars.
Waxqabadka siyaasadeed illaa Janaayo 2017
Gaar ahaan, wuxuu si qoto dheer uga hadlay shuruudaha canshuur dhimista shirkadaha, fududeynta nidaamka canshuuraha, hoos u dhigidda daynta federaalka, iyo diidmada sharci-darrada sharci-darrada ah.Siyaasadda dibadda waxay ka soo horjeedaa heshiisyada ganacsiga xorta ah waxayna ku doodaan aragtida ah inaysan Maraykanku faragalin ku lahayn dunida oo dhan.
Dhamaadkii xiligiisii ​​ugu horreeyey ee xafiiska, Barack Obama wuxuu noqday qof caan ah,Birters, kooxo dad ah oo u baahan cadeyn ah in Obama uu ku dhashay Maraykanka iyo sidaas darteed wuxuu uqalmaa inuu noqdo Madaxweynihii Mareykanka (eeg Barack Obama Dhibaatooyinka). Ugu yaraan hal bandhig telifishin ah, Trump ayaa si cad u ballan qaaday in haddii Obama uu bixiyo dukumintiyada loo baahan yahay, 5 wuxuu malaayiin doolar ku darsadaa sadaqada, sida uu qabo sirta madaxweyne.Obama ma uusan ka jawaabin caqabadan.
2015 Trump ayaa naqdiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Bush si uu u soo duulo Ciraaqoo wuxuu ku yidhi, ee la xiriira dhacdooyinka ee Liibiya, Suuriya iyo Masar, siyaasadda arrimaha dibadda ee Barack Obama oo hore Secretary of State Hillary Clinton ee Africa iyo Bariga Dhexe sababay dhimashada "boqolaal kun".Intaa waxaa dheer, siyaasaddan ayaa ku kacaya lacago badan oo laga yaabo in la soo saari karo ujeedooyin faa iidaysan oo ku yaal Maraykanka, sida laga soo xigtay Trump.
Waxaan ku qaatay 4 trillion dollars isagoo isku dayaya inuu afgembiyo dad kala duwan, oo daacad ah, haddii ay jiraan haatan ahaayeen, oo aan awoodin in ay kuwa 4 trillion kharashka ee dalka Mareykanka si ay u cusboonaysiiyaan our waddooyinka, buundooyinka, garoomada diyaaradaha iyo dhibaatooyin kale oo badan in aan, waxaan noqon lahaa aad u fiican.
In 2015 Trump yeedhay German Chancellor Angela Merkel sida "u badan tahay in hogaamiyaha ugu weyn dunida hadda," laakiin sannad ka dib Angela Merkel si adag u dhalleeceeyay in ay siyaasadda ajinebiga soo dhawayn gudahood dhibaatooyinka socdaalka Yurub.
Trump wuxuu leeyahay dabeecad wanaagsan oo ku wajahan Israa'iil wuxuuna sheegay in uu aqoonsan doono Yeruusaalem oo ah caasimadda Israa'iil.Shiinaha, Trump wuxuu leeyahay xiriir xun oo aan wanaagsaneyn. Shiinaha ayaa ku dhaleeceeyay siyaasadeeda ganacsi, taas oo, aragtidiisa, ku dheehanayso Maraykanka, waxaanay Maraykanka u diyaarinaysaa shaqada oo waxay ku hanjabtay in ay soo saari doonto shaqooyin badan oo suuqyada Shiinaha ah.
Hadal uu 2015 ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxwaynaha Maraykanka bishii Juun, wuxuu sheegay in madaxweynaha uu dhisi doono derbi weyn oo xuduuda Mexico iyo Mexican ay bixin doonto:
Marka Mexico ay dadkayaga noogu soo dirto, ma soo diri karto kan ugu fiican. Kuma soo diri doonaan adiga ama adiga. Waxay u diraan dad leh dhibaatooyin badan waxayna dhibaatooyinkan noo keenaan. Waxay keenaan maandooriye, dembi keenaan, waa rabshad. Laakiin qaar - waxaan filayaa - waa dad fiican.
NBC Universal dhawaaqay wax yar ka dib, ku salaysan erayadiisii ​​uu kaga soo galootiga in ay yihiin aan waafaqsanayn qiimaha ay ixtiraam iyo kalsooni oo dhan ku saabsan, Trump cancels TV oo dhan waxay muujinaysaa on daayey. Ganacsade A ayaa sheegay in uu taagan yahay erayada uu dambeeya iyo dacweyn doonaa saldhiga.Dalka Maraykanka, ku saabsan 11 ayaa ku nool malaayiin muhaajiriin sharci darro ah, wax badanna waxay ka yimaadaan Mexico.
Trump dooni inuu joojiyo dhammaan taageero dhaqaale ka lacagaha federaalka loogu talagalay "magaalo-doonka" in lagu bixiyo hoy ay tahriibayaan aan diiwaan gashneen xadgudub ku ah sharciyada federaalka. Waxa loogu yeero "magaalooyinka quduuska ah" heysatay inta badan dimuqraadiga, ka mid ah taas oo ka mid ah New York, Los Angeles, Miami ama San Francisco, magaaladii degmada maxaliga ah ma sheegaan in ay illegals Xafiiska Socdaalka Federaalka iyo diido inuu sameeyo iyo sidoo kale bilayska maxalliga ah.Duqa Magaalada New York Bill de Blasio ayaa loo sheegay in uu diyaar u yahay inuu tago maxkamad si uu u difaaco "Asylum City" oo ka socda dawladda federaalka ah.
Bishii Agoosto, 2016 Trump ayaa sheegay in Maraykanku uu aqoonsado Ruushka Ruushka ee 2014 Crimea haddii ay u horseedi lahayd xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya Ruushka.
Dadka ku nool Crimean, sida aan ka maqlay waxa aan maqlay, waxay noqon lahayd halkii ay ku ahaan lahayd Ruushka halkii ay hore u joogeen. Waa inaan sidoo kale tixgelinnaa arrintan.
Vladimir Putin ayaa ugu yaraan ku hadley ololaha doorashooyinka ee 2016, laakiin saxaafada Ruushka ee Trump ayaa si fiican u qoray xilli ciyaareedkan. Mr Trump ayaa sidoo kale sheegay in Putin uu ahaa "hoggaamiye xoog leh" oo uu "u muuqdo inuu si wanaagsan u socdo," laakiin wareysi uu la yeeshay ABC wuxuu sheegay inuusan xiriir la lahayn Putin oo aanu waligiis la kulmin.Wuxuu taageeray Ruushka ka soo horjeeda kacdoonka iyo dawlad Islaami ah (IS) ee Suuriyaiyo muujiyay rabitaan ah in ay iskaashi la leh Russia ee dagaalka ka dhanka ah IS.
Ka dib markii uu is casilay madaxa latalinta arrimaha ammaanka muddo gaaban madaxweyne Trump, oo ah taliyihii hore ee Michael Flynn, oo u ololeeya xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeya Ruushka, afhayeenka Aqalka Cad Sean Spicer 14. Febraayo 2017 ayaa sheegay in Madaxweynaha Trump uu ka fiirsanayo Crimea oo qayb ka ah Ukraine, wuxuuna filayaa in Ruushku uu ku soo laabto jasiiradda Ukraine. Spicer ayaa sidoo kale loo gudbiyay ereyada Safiirka Maraykanka u fadhiya Qaramada Midoobay Nikki Haley, oo ku dhawaaqay Qaramada Midoobay in cunaqabatayntii la dagaalanka Ruushka ay sii jiri doonto ilaa Crimea uu ku soo laabto Ukraine.
Madaxweynihii hore ee dalka Suuriya Bashar al-Asad ayaa ku tilmaamay "mucjiso", laakiin sidoo kale wuxuu yiri, "Ma jecli madaxweynaha Suuriya Bashar Asad, laakiin Asad waa la dilay dagaalyahanka Islaamiga ah (IS). Ruushka oo diley dagaalyahannada IS iyo Iran ayaa diley dagaalyahanno IS. "
Wareysi dambe ay goobjoog ka ahaayeen dadweynaha u sheegay Trump si wax looga qabto Senator John McCain oo uu xirfadiisa military, gaar ahaan intii lagu jiray Dagaalkii Vietnam ah: "Ma ahan geesi. Haa, waa geesinimo maxaa yeelay waa la qabtay. Waxaan jeclahay kuwa aan lagu qabtay. "McCain ayaa ku burburtay diyaarad uu xilligii weerarka lagu soo Hanoi inta lagu guda jiro Operation Rolling Thunder, jebiyey lugta, ayaa la qabtay oo ay dagaal Vietnamese iyo xabsi muddo shan sano ah. Hadalka Trump wuxuu keenay dood ku saabsan in haddii McCain uu ahaa geesinimo dagaal.
7. December 2015, maalmo yar ka dib weerarkii argaggixisada ee San Bernardino, Trump ayaa soo saaray bayaan ka bilaabma weedhan:
Donald J. Trump waxa uu ku baaqay in si buuxda oo dhamaystiran loo geliyo Muslimiinta Maraykanka illaa wakiillada dalalku ay ogaadaan waxa dhacaya.
Markii la weydiiyay oo ku saabsan horumarinta waxa uu si gaar ah loogu tala galay, waxa uu sheegay in this hortago ma codsan lahaa oo kaliya in ay xag ah, laakiin dadka oo dhan anfici Islam, oo ay ku jiraan Muslimiinta doonayaan inay ku soo Maraykanka dalxiisayaal, safarrada ganacsiga iyo sidoo kale dadka muslimiinta ah US muwaadiniinta soo laabtay dalka, tusaale ahaan. fasaxa. Trump Hadalkani waxa uu la kulmay reactions inta badan negative warbaahinta.Boqorka Sacuudiga Valid bin Talal kadibna loo yaqaan 'Trump' America's Shame '. Trump ayaa ku jawaabay in amiirku "rabo in uu xakameynayo siyaasadeena aabihii aabihiis," iyo in la joojin doono ka dib doorashadiisa madaxweynaha Maraykanka.In June 2016 Trump u jilcincy ay booska in ay noqon doonto ganaax ku meel gaar ah, taas oo ka codsan lahaa oo kaliya in ay dadka ka yimid wadamada "xukumay argagixisada ka dhanka ah Maraykanka ama isbahaysigiisa," ama dal oo kaliya "hanjabay by argagixisada."
Trump adag uga hadashay cinwaanka Sacuudi Carabiya, taas oo muhiim ah laakiin dhibaato xulufada Mareykanka ee Bariga Dhexe, oo soo jeediyay in madaxda ay lagu qaban karaa masuul ka ah weerarro argagixiso 11. Sebtember 2001.Trump ayaa sidoo kale ugu yeeray Sacuudi Carabiya in ay ka qaybqaataan dagaalka ka dhanka ah Islaamkawaxayna bixisay kharashka ciidamada Mareykanka ee dhulkeeda.Hillary Clinton waxay weydiisatayClinton FoundationWaxay soo celisay hadiyadaha ay ka heshay Sacuudi Carabiya sababtoo ah Sacuudi Carabiya waxay ula dhaqantay haweenka addoonsi iyo dilida niman rag ah.
Doodda afaraad ee Jamhuuriga ah ee 2016 Trump, wuxuu sheegay in ay noqon doonto mid la aqbali karo oo kaliya in lala tacaalo argagixisada oo keliya laakiin sidoo kale qoysaskooda. Wuxuu sidoo kale sheegay in argagixisadu ay qoysaskooda u isticmaalaan sida "gaashaada nool." In doodda ku baaqay in lala on gobolka Islamic, laakiin sidoo kale uu ku daray in uu sameyn doono wax walba si loo yareeyo tirada khasaaraha dadka rayidka ah.Bartilmaameedka xubnaha kale ee argagaxisada argagixisada ayaa cambaareeyay madaxweyne Barack Obama oo ku saabsan weerarrada bambooyinka iyo qarxinta waxyaabo kala duwan iyadoo la adeegsanayo diyaarado aan cidi lahayn.
9. Augustine 2016 ayaa sheegay in Trump kulan ay martigelisay CNN on Hillary Clinton:
Haddii ay timaaddo inaad dooratid garsoorahaaga (kan ugu sarreeya), (ma jiro) wax aad ka qaban kartid, qaali. ... Inkasta oo laga yaabo inay noqoto taageerayaasha kaalmada labaad - ma garanayo.
Erayadiisa waxaa loo turjumi karaa (kiiska ugu dambeeya) sababtoo ah cudur daar ah.Kadib markii uu ku guuleystey doorashadii Trump, wuxuu yareeyay hadalkiisa iyo hadalkiisa 9. Nofeembar 2016 ayaa ku amaantay Clinton inay "olole adag".
Trump ayaa bilaabay inuu noqdo siyaasad ahaan isaga oo ka go'an 20 tan iyo toddobadii sano ee dambe. qaran ahaan, urur ahaan iyo dhaqaal ahaanba taageeray ololayaasha doorashooyinka. Dhammaadkii 1980-meeyadii, Jamhuuriyaddu waxay ahayd markii ugu horreysay oo aan si rasmi ah loo soo bandhigin. Mikhail Gorbachev, oo aad u xiiseynayay inuu la kulmo 1988 ee New York City, ayaa laga yaabaa inuu sidoo kale arkay. Dhibaatada ugu dambeyntii waxay diiday in ay bixiso dalxiisayaasha. Isla markiiba, wuxuu bilaabay inuu tixgeliyo musharaxiisa u gaarka ah sanadka 1996, oo uu doonayay inuu uuraysto wakhtigaas oo uu madaxweynenimo madaxbannaan iyo Dimuqraadiyadeed.
Oprah Winfrey ayaa muujinaya bandhiggii xNUMX ee ahaa markii ugu horeysay ee uu waydiisto inuu ku fakarayo musharaxa madaxweynaha Mareykanka. Trump ayaa yiri, "malaha malaha," laakiin ma uusan ka talaabin tan. Wuxuu ku biiray dagaalka ka hor doorashooyinka horusocodka ee 1988. Waxa uu ka qaybgalay Duqa Magaalada Xisbiga Dib-u-habeeynta ee Maraykanka oo ku guuleystay laba dawladood, ka dibna ka soo baxay musharaxa. 2000, wuxuu sheegay in uu "si dhab ah u tixgelinayo" dib u magacaabista.
On 16. June 2015 waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday musharaxnimada doorashadii madaxweynaha ee 2016 ee Xisbiga Jamhuuriga. Kadib wuxuu bilaabay jumladiisii ​​hore ee "Do America America Great / Great!"(ingiriisida asalka ah)"Samee America Mar labaad").iyo "America First" ("Marka hore America"). Dooddii ugu horreysay ee Jamhuuriyaddu, wuxuu ahaa kan keliya ee aan ku ballanqaadin in haddii uu dhaco uu ku guuldareysto inuu taageeri doono Goolka Hore oo aan u ordo dhinac saddexaad oo madaxbannaan.
Erayadiisa, wuxuu ka soo horjeeday duullaanka Maraykanka ee Ciraaq ee 2003. Intii uu socday tartanka telefishinka ee musharixiinta madaxweynenimada ee bisha Sebtembar, 2015 waxay naqdiyeen madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush iyo walaalkiis, Jeb Bush, ee dagaalka Ciraaq.
Markii uu ku dhawaaqay musharaxnimada musharaxa madaxweynaha, wuxuu sheegay in uu helay $ 8,7 qiimo ahaan balaayiin doolar; Sida laga soo xigtay Forbes, hantidiisa waxay sameeyaan balaayiin dollar oo 4,5 ah.
Wuxuu si dhakhso ah u noqday musharaxa hoggaanka xisbiga Jamhuuriga.K 3. May 2016 Trump wuxuu ku guuleystay 28 horudhacii hore ee Jamhuuriyada iyo dibad-baxyada (oo loo yaqaan "ururada) wadamada EU iyo territoriska. Kadib 3. May 2016 waxay ku guuleysataa doorashooyinka Hindiya, waxay iska casishay laba ka mid ah labada is haysta - Senator Texas Ted Cruziyo gudoomiyaha Ohio John Kasich,waxayna noqdeen musharaxa madaxweynanimada ee loo doortay madaxweynaha 2016.
Celcelis ahaan, shan doorashada waaweyn lahaa Trump ee May 2016 hogaanka ugu horeysay yar uu iska soo horjeeda ay u badan tahay in doorashada madaxweynaha, Musharaxa Xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. Bogga internetkaReal Clear Politics(RCP) waxaa lagu xisaabiyaa inuu isaga u keeni 0,2% oo dalka Mareykanka ah. Sahamis in dhaceen ay guushu ku Trump (la margin boqolkiiba a) waa sida soo socota: Rasmussen Warbixinnada - 5%, Fox News: 3%, ABC News / Washington Post - 2%, USC Dornsife / Los Angeles Times - 3%. Clinton degay ay guushu ku sahan, kuwaas oo: NBC News / Wall Street Journal - 2%, CBS News / New York Times - 6%.
Dhamaadkii bishii Maajo, 2016 ayaa horey u xaqiijisay tirada codadka ee lagama maarmaanka u ah magacaabidda musharaxa madaxweynenimada ee doorashada madaxweynaha. Sida laga soo xigtay Associated Press, tirada xildhibaannada 1 238 waxay dhaaftay hal cod oo ka badan. Wakiillada, sida madaxweynaha Jamhuuriga Oklahoma Rep. Pam Pollard, ayaa wali hadlay.
Muddo yar ka dib tirinta codadka ee aftida ku jirta xubinimada Midowga Yurub, Trump wuxuu yimid 24. Juun 2016 ilaa Scotland. Helikobter wuxuu ku degay koorsada golfTrump Turnburryoo u dhow Turnberry koonfurta-galbeed ee dalka (Degmada Ayrshire).Kadib markii uu ku dhawaaqay natiijada aftida, Trump ayaa sheegay in "Codbixiyayaasha Britain ay dib u soo celiyeen waddankoodii", taas oo ah isbeddel uu ka dhex abuuray murashaxii ka soo horjeedka doorashadii hore ee Maraykanka. Sida laga soo xigtay joornaalka American Timelse, codka ku saabsan xayiraadda waa mid cusub oo caalami ah (ama adduunka) "dagaalka ugu weyn". Dareen ahaan, sidoo kale waa guusha mashaakilka miisaanka adduunka.
In July 2016 Trump kula macaamilooteen diyaarinta shirweynaha xisbiga Jamhuuriga ee Cleveland ee qeybtii labaad ee bisha on taas oo markii dambe go'aamisay musharaxa xisbiga rasmiga ah ee doorashada madaxweynaha ee November 2016. Afhayeenka mufasiriinta ayaa dhaliyey laba magac oo siyaasiyiin ah kuwaas oo noqon kara musharrixiinta musharrixiinta madaxweyne kuxigeenka Mareykanka, oo wada shaqeynaya. Midaas, waxay ahaayeen New Jersey Guddoomiyaha Chris Christie iyo gudoomiyaha Gobolka Indiana Mike Pence.Trump ayaa markaas loo doortay Mike Pence isaga oo u sharaxan musharaxiisa.
Doorashada Madaxweynaha Maraykanka
Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashadii 8. Nofeembar 2016 oo noqday 45. Madaxweynaha Maraykanka. Xafiiska ayaa si rasmi ah u qabtay 20. Janaayo 2017.
On 11. November magacaabay Madaxweyne Ku-xigeenka Trump mustaqbalka Mareykanka Mike dinaar horseeday kooxda in diyaariyey bilawga maamulka cusub. Kooxdu waxay sii wadi doontaa inay ka shaqayso Chris Christie, Guddoomiyaha New Jersey, Gen. Michael T. Flynn, Guddoomiyaha hore ee Golaha Wakiilada Newt Gingrich, dhakhtar iyo siyaasiga Ben Carson, a hore ee New York Duqa Rudy Giuliani iyo Senator Jeff Kulamo Alabama. Kooxda ayaa sidoo kale ah guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Reince Priebus, oo madax ka ah ololaha doorashada ee Trump, Stephen Bannon iyo ganacsade asal ahaan Jarmal Peter Thiel, kuwaas oo maal-caasimada ee Silicon Valley. Waxay sidoo kale waa Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump iyo Jared Kushner in-sharciga.
On 13. Nofeembar 2016 ayaa magacaabay Gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Jamhuuriga Jamhuuriga, Rein Priebuss, oo ah madaxa sare ee aqalkiisa Aqalka Cad. Priebus ayaa waxa sabab u wanaagsan oo Trump taageerada badan ee ololaha doorashada, xirfadaha urureed iyo xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay, tusaale ahaan, Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Paul Ryan. Isla mar ahaantaana waxaa lagu dhawaaqay in Stephen Bannon, oo ah milkiilaha internetka ee internetka Breitbart.com, uu noqon doono madaxa lataliyaha madaxweynaha (lataliye sare).
Wax yar ka dib guushii Trump guushii doorashadii madaxweynaha, 14. November 2016, wada-hadaladii ugu horreeyay ee u dhaxeeya isaga iyo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhacay. Labada siyaasadoodba waxay ballanqaadeen in ay si wada jir ah u wada shaqeeyaan. Putin ayaa u ogolaaday Trump wadahadal wadatashi ah, isaga oo ka hadlaya ixtiraam iyo is-qabqabasho dhinaca arrimaha kale ee dhinaca kale. Labada dhinac waxay isku raaceen in xiriirka u dhaxeeya labada dal aan fiicneyn. Sida laga soo xigtay Kremlin, labada dhinac waa in ay "ku soo noqdaan iskaashiga udubdhexaadka ah ee faa'iidada labada dhinac, iyada oo la tixgelinayo danaha labada dal iyo amniga iyo xasilloonida adduunka." Gaar ahaan, dadaalada waa in loo sameeyaa labada dal si loola dagaallamo argagixisada caalamiga ah iyo xag-jirnimada. Kooxda Trump ayaa sheegtay in madaxwaynaha la doortay uu ku hadlay mawduucyo dhowr ah oo Putin ah. Trump wuxuu jecelyahay "xiriir adag oo joogto ah lala leeyahay Russia".
Shiinaha u hoydeen dibad rasmi ah u wac Madaxweynaha Trump Taiwan cái Jing-wen ee 2. December 2016, taas oo ahayd xidhiidhka ugu horeeyay ee si rasmi ah u dhexeeya hogaamiyaha American iyo Taiwan in ay jebiyaan diblumaasiyadeed ee u dhexeeya Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Shiinaha (Taiwan) ee 1979, ka dib markii horeba ka yar Madaxweynaha Richard Nixon ka dhacay 1972 gudbay weyn ee siyaasadda Maraykanka xagga Shiinaha . Maamulka Obama ayaa sheegay in ay jawaab u call a in dowladda Mareykanka ay sii wadaan in ay taageeraan siyaasadda hal-Shiinaha oo bal ka fiirso Republic of China gobolka jasiiradda Taiwan ee dhulweynaha China.QoraaladaNew York Timessi ay uGuardianwaxaa loo yaqaan 'Trump's call' ee loogu yeero 'kicinta' ee dhinaca shiinaha ee Shiinaha, qaar ka mid ah siyaasiyiin Maraykan ah ayaa sidoo kale dhaleeceeyay Trump.Trump reacted to the twitter: "Waa arrin xiiso leh in Maraykanku uu iibiyo billions of dollar oo qalab millatari oo Taiwan ah mana aqbalo wicitaanka hambalyo."
Dawlada Donald J. Trump
Don J. Wright(midab.)
iyo horumarinta magaalooyinka
Wasiirka Amniga Gudaha
Agaasimaha xafiiska Aqalka Cad
Danjiraha Maraykanka u fadhiya Qaramada Midoobay
Wax yar ka dib ku guuleystay doorashada, Trump waxay bilaabeen inay arrimaha shaqaalaha la xiriira isku duwidda ee US cusub oo degan jagooyinka kale ee muhiimka ah ee hay'adaha dawladda ka qabtaan. Toban maalmood ka dib doorashada, wuxuu horay u go'aansaday saddexda goor ee muhiimka ah. Sida wasaaraha cusub caddaalad magacaabay Senator Jeff hore ee Alabama Kulamo. Sida la taliyaha amniga qaranka markii uu u sharaxan Sarreeye guud iyo madaxii hore ee counterintelligence military DIA Michael T. Flynn, kuwaas oo, si kastaba ha ahaatee, horraantii February 2017 leeyihiin shaqo this sabab u tahay xiriir ay hore madaxda Ruush casilay. Oo isna wuxuu u bedelay firfircoon Gen. HR McMaster, kuwaas oo weli ay leedahay in la xaqiijiyay by Senate Mareykanka. Agaasimaha CIA ka dib markii madaxweynaha Trump noqday hadda Jamhuuriga Congressman Mike Pompeo.
Wasiirka cusub ee waxbarashada ayaa noqday gobolka Betsy DeVosová of Michigan, kaas oo maray Senate kaliya by codka Madaxweyne ku-xigeenka Mike oo dinaar, 51 cabirku yahay: 50. Sida safiirka Qaramada Midoobay u sheegaysaa Trump taliyihii Jamhuuriga hadda ee South Carolina Nikki Haley, waalidkood u haajiray Maraykanka ka India.Go'aanka kale ee shaqaalaha ayaa ahaa magacaabista Steven Munchin oo ah Xoghayaha Maaliyadda ee xigga ee Maraykanka, oo ah maamulihii hore ee Goldman Sachs Banking.
Xubin kale oo ka tirsan dawladda Trump ayaa noqotay hawlgab 66three General James Mattis oo ahaa Wasiirka Difaaca. Mattis waxaa loo doortay Senatka by 98: 2. Intii lagu jiray mudaharaadkii 44 ee hawlgalkii millatari ee maraykanka, Mattis wuxuu inta badan u adeegsaday Baabuurta Marine, oo ay ku jiraan labada dagaal ee Ciraaq iyo Afgaanistaan.
Sida wasiirka cusub ee Guriyeeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka ayaa loo xaqiijiyay inuu siyaasi American Afrika iyo tartan hore ee musharaxnimada Trump Madaxweyne Ben Carson, dhakhtar qalliin oo by xirfad.
Si tartiib ah magacyada xubno kale oo ka tirsan dawladda Trump ayaa lagu dhawaaqay. Waxaa ka mid ah, ka mid yihiin:. Wilbur Ross, maalgeliyaha 78letý sida Wasiirka Ganacsiga, Andrew Puzder sida Wasaaradda Shaqada, taas oo, si kastaba ha ahaatee, ma mari Senate, Elaine Chao, xaaskiisa oo ka mid ah wax raadayn kara Senator McConnell Mitsche wasiirka boostada Gaadiidka (asal ahaan kasoo jeeda Taiwan) iyo firfircoon ilaa dhawaan si firfircoon Star General John Kelly oo ah Wasiirka Amniga Homeland.
Mid ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan ee maamulka cusub ee Trump waa Wasaaradda Dibadda. On 5. Bishii December 2016 waxay ogaatay inay noqon karto Rex Tillerson, oo ah guddoomiyaha shirkadda ExxonMobil ee shirkadda weyn ee saliida.13. December 2016 ayaa xaqiijiyay in Trump uu doonayo inuu Tillerson u sheego inuu yahay wasiirka arrimaha dibadda.Tillerson's magacaabay ugu dambeyntii xaqiijiyay Senatarka Maraykanka ka dib markii muddo dheer socday.
Dhamaadkii Diseembar 2016 waxa uu magacaabay lataliye kale oo Trump, oo ah milkiilaha maraykanka ah Elon Musk.15. December 2016 waxaa lagu dhawaaqay in Ryan Zinke, oo ah xubin ka tirsan Golaha Wakiilada ee Gobolka Montana, uu noqon doono Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Trump.
Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu doonaayo inuu dhiso post cusub ee wakiilka gaarka ah ee wada xaajoodka caalamiga ah. Waxaa uu noqonayaa talada guud 49letý Trumpových Shirkadaha Jason Greenblatt, waa kan Yuhuudda, sida David Friedman, safiirka mustaqbalka si Israa'iil. golaha wasiirada waa in haboon horumar ku naadiyey badan xiriirka ka dhaxeeya Israa'iil iyo Trump Mareykanka ka dib markii ay kor u madaxtinimada ka dib, kuwaas oo xiriir in mudo ugu dambeeya ee maamulka Obama on lid ku ah, mid aad u xun.
Mid ka mid ah magacaabayaasha ugu dambeeya ayaa ahaa magacaabida agaasimaha mustaqbalka ee dhammaan shirkadaha 17 US ee leh qiyaaso 100 000 oo leh wax ka badan 50 bilyan oo doolar sanadkiiba. Dan Coats, hadda Senator Mareykanka ah ee Gobolka Indiana, iyo Safiirkii hore ee Berlin, wuxuu noqon doonaa Danny. Si buuxda magacaabista ugu dambeysay ee lagu dhawaaqay 19. January 2017, ayaa ahayd magacaabista guddoomiyihii hore ee Georgia 70letny Sonny Perdue, Wasiirka Beeraha.Si kastaba ha ahaatee, siyaasaddan weli lama xaqiijin karo Senatka.
20. Janaayo 2017, taas oo ah, taariikhda caleemo saarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaliya laba wasiir ayaa la xaqiijiyey Senatka Maraykanka. Xafiisyadoodana waxaa laga yaabaa in James Mattis uu noqdo xoghayaha difaaca (Pentagon Chief) iyo John Kelly oo ah Xoghayaha Amniga Gudaha.
Xubnaha Trump waa dawlada ugu qanisan "taariikhda Mareykanka, iyo malaha dunidaba. Maamulka waa multimillionaires dollar badan, oo ay ku jiraan laba bilyan (marka laga reebo Madaxweynaha qudhiisu), iyo waxa Willbura Ross iyo Betsy DeVos. Intaas waxaa sii dheer, waxa ay wakiil madaxda caan ka warshado kala duwan (tamarta, maaliyadda, real estate) sida Rex Wasiirka Arrimaha Dibadda Tillerson iyo Wasiirka Maaliyadda Steven Mnuchin.
20. Janaayo 2017 wuxuu ahaa furitaanka Donald Trump sida 45. Madaxwaynaha Maraykanka ka hor Capitol ee Washington. Waxaa ku xigay hadalka Trump's caleemo-qoyseed, gaari baabuur ah oo ka yimid Capitol ilaa Aqalka Cad, oo ah nasiib wacan oo milatari iyo qaabab kale, iyo xaflado kale.
21. Bishii Jannaayo, Trump ayaa soo saaray xeer-hoosaadyo hoose si loo yareeyo culayska maaliyadeed ee la xidhiidha dib-u-habeynta daryeelka caafimaad ee Barack Obama ka hor inta barnaamijka Obamacare si buuxda loo tirtiray. Waxa kale oo uu booqday xaruntii CIA ee Langley, Virginia, oo ay taageertey dhaqdhaqaaqyadeedii.
On 23. Bishii Janaayo, Trump ayaa ku dhawaaqay Heshiiska Iskaashiga Transpacific ee aan hore loo arag.
25. Bishii Jannaayo, Trump ayaa soo saaray amar fulin ah oo lagu dhisayo derbi xudduudka ah oo ay la wadaagto Mexico isla markaana bilaabay baaritaanka eedeymaha loo soo jeediyay ee doorashooyinka cod bixinta intii lagu guda jiray doorashadii madaxweynenimada ee 2016.
Safarkiisa ugu horeeyay ee rasmiga ah ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Aqalka Cad ee 27. Janaayo 2017. Isaga iyo Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa Maya ayaa xaqiijiyay xiriirka aan caadiga ahayn ee u dhaxeeya wadankooda shir jaraa'id oo xiga.
Wax yar ka dib markii uu ku biiray madaxweynaha, 31. January 2017, musharax Trump magacaabay booska sagaalaad ee Maxkamadda Sare ee Maraykanka, kaas oo ay banneeyeen 16. Febraayo 2016 dhimashada garsoore Antonina Scalia. Waayo, kanu meel aad u muhiim ah loo doortay 49letý qareen muxaafidka Neil Gorsuch, kuwaas oo ka shaqeyneysey ilaa 2006 on mid ka mid ah 13 maxkamadda racfaanka federaalka, kaas oo tusaale ahaan labaad ee ugu sareeya caddaaladda American. Magacaabista lahaa in la ansixiyo Senate Maraykanka, taas oo ahayd iska caabin ah in inta badan ee senators Democratic hore uma badna.Gorsuch, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ahaa 7. Abriil 2017 ayaa xaqiijiyay Senatarka Maraykanka iyadoo codka 55: 45. On 10. Abriil 2017 wuxuu dhaartaa dhaartii kadibna wuxuu ku biiraa Maxkamadda Sare ee Maxkamadda Sare ee Nolosha.
2. February 2017 dhammaaday wada hadalka telefoonka Trump Ra'iisul Wasaaraha Australia Malcolm Turnbull by macluumaad sharci-darro ah daranyihiin la dillaacaan labada dhinac ka dib markii labada dowlada ku heshiiyay in la sii wado heshiiska on dib u dejinta ku saabsan 1250 magangalyo-doonka xeryaha lagu hayo Australian on gasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea by Australia Maraykanku wuxuu soo gabogabeeyey xukunkii madaxweyne Barack Obama.
Ka jawaabidda 29 Test Ballistic Missile Missile 2017, 3, waxay go'aansatay 2 iyo Donald Trump. Bishii Febraayo ee sanadkan si ay u saarto cunaqabateynta qaar ka mid ah dalkaas. Xukuumadda Iran ayaa cambaareeysay ciqaabyada cusub sida sharci-darrada ah waxayna sii sheegeen in ay soo saari doonto xayiraad sharci ah oo looga jawaabayo shakhsiyaadka Maraykanka iyo hay'adaha kale ee caawinaya "kooxaha argagixisada ee gobolka". Burburin horeba wuxuu leeyahay XNUMX. Bishii Febraayo ee Twitter ayaa sheegay in xukuumadda Iran ay heshay digniin rasmi ah oo imtixaan ka qaadaysa Maraykanka.
4. Bishii Febraayo, garsooraha fadaraalka ee gobolka Seattle ayaa joojiyay ansaxnimada xukunka madaxweynaha ee Trump, taasoo ka hor istaagtay muwaadiniinta toddobo dal oo muslimiin ah inay galaan dhulka Mareykanka waxayna sababeen dhibaatooyin ka soo qaadaan garoomada diyaaradaha. Ugu dambeyntii, go'aanka maxkamada waxaa xaqiijiyay saddex maxkamad oo San Francisco ku taal oo garsooreyaashiisa. Ka dib dhowr maalmood oo hubin ah oo ku saabsan habka soo socda, waxaa lagu dhawaaqay in maamulka Trump uusan kiiskani keenin Maxkamadda Sare ee Mareykanka go'aanka ugu dambeeya. Maamulku wuxuu filayaa go'aanka maxkamadda federaalka ee Seattle in ay ku jiri doonto sinnaanta hadda ee codadka iyo ka soo horjeeda (afarta afaraad).
Sabtida 4. Febraayo 2017 ayaa sidoo kale la hadlay Telefishinka Ruushka Vladimir Putin. Waxyaabaha wareysigan laguma ogaanayo. Maalintaas oo kale Trump ayaa lagu magacaabaa Jarmalka Angela Merkel.
11. Trump wuxuu sheegay inuusan ka jawaabin dacwadaha federaalka oo uu xaqiijiyay arrinta suurtagalka ah ee qaraar cusub oo lagu hayo muwaadiniinta qaar ka mid ah wadamada Muslimiinta ah ee lagu mamnuucay in ay soo galaan dalka Mareykanka.
15. Bishii Febraayo, Trump wuxuu helay aqalka cad ee ra'iisal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Intii lagu guda jiray kulanka, Madaxweynaha Trump ayaa ku celiyay ogolaanshihiisa isaga oo ku wareejiyay safaaradda Mareykanka ee Israel ka timid Tel Aviv ilaa Yeruusaalem. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, Israel ayaa ku baaqday "wax yar oo ka dambeeya" iyada oo la dhisayo degsiimooyinka Yuhuudda ee ku yaala dhulka Falastiiniyiinta. Waxa uu sidoo kale soo jeediyay in uu aqbali karo xal "hal dawlad" iyo xal laba-dawladood ah oo ka socda Israel iyo dhulka Falastiin.
Sidoo kale 15. Trump ku dhawaaqay in qareenada February iyo Waaxda Cadaaladda in jiidi doonaa ilaa amar cusub fulinta ee Madaxweynaha, taas oo ah waxaa loogu yeedhi lahaa xeerka asalka ah, oo diidaya inay galaan Maraykanka ee muwaadiniinta ee toddoba dal Muslim. Isla mar ahaantaana in amar ka, kaas oo la joojiyay maxkamadaha federaalka, bedelay "a dheeraad ah si ciriiri yar warinayaa" text, taas oo loo habeeyey in aan kuwani "go'aano xun ee maxkamadaha".
25. Trump ayaa hoos u dhigay ka qayb-galka qadada casho ee sanadlaha ah ee wariyayaal caddeeyay Aqalka Cad (White House) in lagu qabto 29. April 2017, oo tilmaamaysa dabeecadda colaadeed ee warbaahinta isaga iyo siyaasaddiisa. Wariyaha Guddoomiyaha Association Jeff Mason markii hore ku dhawaaqday in inta lagu guda jiro casho tani waa in laga dabaal, "doorka warbaahinta news madax banaan ee Jamhuuriyadda caafimaad leh." Ka dib markii renunciation Trump ee ka qayb qaadashada ururka wariyayaasha in go'aanka Trump ayaa si xad dhaaf diiday.
On 28. Bishii Febraayo 2017, Madaxweynaha Trump ayaa markii ugu horeysey ka soo horjeestay labada aqal ee Congresska Maraykanka. Waxa uu hadal u soo jeediyay dhibaatooyinka ay la kulmeen Maraykanka iyo xudduuda siyaasadeed. Wuxuu ugu baaqay Jamhuuriyadda iyo Dimuqraadiyiinta in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan xalinta dhibaatooyinka dalka. Waxa uu ku celiyay rabitaankiisa ah inuu ku dhiiri galiyo abuurista shaqooyin badan oo cusub iyo in si muuqata loo hagaajiyo kaabayaasha Maraykanka, oo meelo badan aaney xaalad wanaagsan ku jirin. Waxa uu ku adkaystay baahida loo qabo siyaasad adag oo soogalooti ah, iyada oo shuruudahan lagu xaqiijiyay qorshaha ah in la dhiso qaybo dheeraad ah oo derbiga ah oo ku yaal xudduudka Mexico. Waxa uu soo sheegey dibuhabaynta cashuuraha, laakiin wali wax faahfaahin ah kama bixin. Marka la eego kharashka difaaca, miisaaniyad sanadeedka 54 ayaa kor u qaadi doona.
On 4. Maarso 2017 ayaa gaartay burbur hor leh oo u dhexeeya madaxweyne Donald Trumpe iyo horjoogihii hore, Barack Obama, oo ah cabbiro cusub. Trump ayaa ku eedeeyay Obama, mid ka mid ah fariimaha Twitter-ka, isaga oo u ogolaanaya telefoonkiisa inta uu socdo ama ka dib doorashada. Si kastaba ha ahaatee, ma horey u soo bandhigin wax caddayn ah. Trump sidoo kale loo yaqaanno "nin xun ama jirran."Warar ku saabsan weerarka Trump ee ku aaddan Obama ayaa sidoo kale loo keenay Lidovky.cz. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu soo waramey in Trump uu akhriyay Obama oo booqasho ku tagay safaaradda Ruushka ee Sergei Kisljak ee Aqalka Cad. Trump ayaa soo bandhigay booqashadii 22 ee Kisljak intii uu socday xukunka Obama, oo afar ka mid ah ay ku jiraan 2016.Kadib markaan la hadleyno Trump ama xubno ka tirsan kooxdiisa ayaa su'aal laga keenay, laakiin 22. March 2017 ayaa xaqiijiyay Devin Nunes, Guddoomiyaha Jamhuuriga ee Guddiga Baarista Guud ee Maraykanka. Sida laga soo xigtay isaga, ka dib doorashada Trump, madaxweynuhu wuxuu ahaa bilihii November iyo December 2016 iyo Janaayo 2017. Trump ayaa markaas ka dib sameeyay dowladiisa, isaga oo la hadlay saaxibadiisa ku saabsan qorshihiisa, waxaana uu telefoon kula soo xidhiidhay dowladaha shisheeye. Munaasabadan ayaa waxay noqon kartaa sharci Nunes ah, laakiin Nunes welwelsan tahay in warbixin qoraal ah oo ku saabsan adeegyada sirdoonka eavesdropping waxaa si toos ah xusay magacyada xubnaha kooxda Trump, oo aan noqon lahaa sharci.
On 17. 2017 ayaa booqday madaxweynaha Jarmalka Angela Merkel, Madaxweynaha Trump ee Aqalka Cad, oo ay la socdeen marti-galiyayaal badan. Ugu horreyntii, labada nin ee xildhibaanadu waxay ka mid ahaayeen afarta indhood ee Xafiiska Oval-ka iyo ka dibna goobo badan oo kaqaybgalayaasha, badanaa ku saabsan xiriirka ganacsiga labada dhinac. Shirkii jaraa'id ayaa la qabtay ka dib, kaas oo ka soo qayb galay tiro badan oo ka mid ah wakiilada saxaafadda ee adduunka oo dhan.maalin ka dib markii Trump daabacay on Twitter text this: "Germany ku leedahay idiina weyn ee NATO iyo Maraykanka waa inay bixiyaan dheeraad ah oo difaaca xoog leh oo qaali ah in Germany siin!"
Donald Trump oo ah aargudasho ah weerarka kiimikada ee Suuriya, oo dilay daraasiin dad iyo carruur ah, ayaa u diray 7. April 2017 oo ku yaala saldhigyada gobalka Bashar Asad 59.Wuxuu si dhakhso ah u soo sheegey weerarka madaxweynaha Shiinaha, kaas oo martigeliyay xafiiskiisa Mar-a-Lago ee Florida.
On 5. July 2017 Trump ayaa booqasho ku tagtay dalka Poland. Safarkiisa Europe wuxuu ku xiran yahay ka qaybgalka shirarka G20 ee dalalka ugu muhiimsan ee magaalada Jarmalka ee magaalada Hamburg ee 7. 8. Julaay. Waxaa la socota xaaskeeda Melanie Trump iyo gabadheeda Ivanka Trumpová. In Warsaw, uu kula kulmay wakiillo ka socda dalalka 12 Yurub ee bariga iyo badhtamaha Europe in biiray ee "initiative saddex badaha" (Baltic, Adriya hore iyo Badda Madow). Kulankii ugu horreeyay ee kooxdani waxay ka dhaceen 2016 gudaha Croatia. Maalintii xigtay waxay ahayd aroortii kulan ay la yeesheen Madaxweynaha Poland Andrzej Duda. Gelinka dambe Trump ka hor shirka ka tirsan Polish iyo dadka dagan caasimada ka hadlay taallo in ay ka tirsan Warsaw kacdoonkii in 1944, kaas oo la bloodily cadaadis by Wehrmacht Jarmalka. Trump wuxuu si weyn uga mahadcelinayay geesinimada Booliska iyo halgankoodii dheeraa ee xorriyadda. Waxa uu ku biiray qodobbada 5 ee Heshiiska NATO, kaas oo u dammaanad qaadaya is-dhexgalka Isbahaysiga Isbahaysiga difaaca ee ka soo horjeeda weerarrada dibadda. Wuxuu si degdeg ah ugu baaqay Ruushka inuu joojiyo "xasiloonida xaaladda". Muddo yar ka dib hadalkiisa, Trump iyo saaxiibkiis oo u yimid Hamburg ayaa yimid.
Shirkii G20 ee Hamburg, Trump ayaa markii ugu horeysay kula kulmay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
On 1. August 2017 waxay ansixisay Senate-ka Maraykanka Christopher Ray oo ah agaasimaha cusub ee Xafiiska FBI-da Mareykanka (FBI) ka dib markii codsiga James Comey. Waxay noqotay qayb ka mid ah codadka 92: 5, taas oo macnaheedu yahay in inta ugu badan ee xubnaha golaha xisbiga Dimuquraadiga ay taageeraan magacaabista madaxweynaha Trump.
Kalluumeeyaha ayaa soo jeediyay soo jeedin ay soo saareen Senators Tom Cotton iyo David Perdu, taas oo yarayn doonta socdaalka sharci ee Mareykanka. Tirada kaararka cusub ee cagaaran, degenaansho iyo oggolaansho shaqo, waxay hoos u dhigi doontaa illaa nus milyan illaa nus milyan sannadkiiba. Xeer-ilaaliyeyaasha Dimoqraadiga ayaa doonaya in ay joojiyaan hindisahan, maxaa yeelay waxay dhibaato u geysan lahayd muhaajiriinta ka imanaya waddamada aan Yurubta ahayn,kuwaas oo tan iyo markii la ansixiyay sharciga soo galootiga iyo jinsiyada ee 1965 ay ka mid yihiin muhaajiriinta sharciga ah ee Mareykanka.
Dhexdhexaad iyo dhaleeceyn
Inta lagu guda jiro noloshiisa warbaahinta, Donald Trump ayaa dhowr jeer ku dhaleecaysay dhowr dumar ah. In Howard Stern ee "Howard Stern Show" ee 2005, 1 ayaa ku qiimeeyay haweenka ku jira 10 inay noqdaan XNUMX.Hadalkiisuna ma ahayn guud ahaan, laakiin waxa sidoo kale loogu talagalay dumarka gaarka ah. 1996 waxa lagu magacaabo Miss Universe Alicia Machado "Miss Piggy", "Mashiinka cunto" iyo "Miss Housekeeping". Donald Trump ayaa si dhab ah u weeraray actresska Maraykanka Rosie O'Donnell dhowr jeer, xitaa inta lagu guda jiray doodda Xisbiga Jamhuuriga ee 2015.
Sanad ka dib 2016, markii uu dagaalku socday, madaxweynaha Washington Post ayaa daabacay video-ka 2005.Video ku bilaabmaa ah widths baska socota ee la xidhiidha soundtrack ah wareysi Donald Trump la idaaciga hore ee TV Billy Bush gudaha baska iyo sii wadaan in ay waraysi Trump, Bush iyo aktarada Arianne Zucker studio NBC Universal. Wareysi, Trump si aan habooneyn ayaa looga hadlayay haweenka waxayna ka hadleen weerarrada galmada ee uu qirtay. Donald Trump ma uusan ogeyn in makarafoonka uu ku dhajiyay isaga horey u ahaa firfircooni. Gaar ahaan, wuxuu ka hadlayay haweenka uu geystay iyo in uu marwalba marayay sababtoo ah wuxuu caan ku ahaa. Wixii hadaladani, Trump raaligelin ka dib daabacaddooda; Waqtigaas badanaa taageerayaashiisa ayaa isaga tagay.Kadibna, haweeney dhowr ah ayaa xaqiijiyay ereyadiisa, iyaga oo ku andacoonaya in ay yihiin wadahadalada Trump oo ku saabsan duubista. Mid ka mid ah haweenka ayaa ahaa Natasha Stoynoff oo ka socda majaladdaDadka, bayaankeedu wuxuu dib u xaqiijiyay lix ka mid ah shaqaalaheeda.Waxaa jira cajalado badan oo maqal ah oo Trump ay ka hadlaan haweenka. Tusaale ahaan, 1997, wuxuu sheegay in uu yahay agaasimaha "Miss Teen USA" tartanka, wuxuu u tegi karaa dharka gabdhaha gabdhaha oo u arko iyaga oo qaawan. Waxay marwalba u sheegtay gabdhaha in kani ay tahay kormeer. Qaar ka mid ah tartamayaasha asalka ah ayaa ku dhawaaqay in qoraalkani yahay run.
1: Burburinta Adduunka
2: Tirada Kulanka (New York)
3: Kulanka Trump Tower
4: Qaadashada: Farshaxanka Heshiiska
11: Doorashooyinka Madaxtooyada ee 2016
12: Iskaashiga Transpacific
13: Abaarta (Sheeko)
17: Kulamada Jeff
18: Musharax Madaxweyne
19: Xisbiyada Dib-u-habeynta ee Mareykanka
22: Hotel Trump International iyo Tower (Chicago)
24: Janaayo 2017
27: Weerarka baabuurta ee Charlottesville
31: Siyaasadda Sayniska
36: Barqadda Biyaha Saddexaad
39: Aqalka Cad
40: Aftida codbixinta ee UK xubin ka ah Midowga Yurub 2016
Donald John Trump (* 14 June 1946 New York) waa siyaasi Jamhuuriyadda Mareykanka ah iyo 45. Madaxweynaha Maraykanka, oo noqday 20. Janaayo 2017. Wuxuu ku biiray Aqalka Cad ee da'diisu tahay 70 oo ah madaxweynihii ugu da'da weynaa ee ugu taajirsan, waxaana sidoo kale noqday ninka ugu horreeya ee xafiiska iyada oo aan khibrad hore u lahayn hawlaha siyaasadeed ama ciidanka.
Trump World Tower waa hudheel qoyan oo hoy ah oo ku yaal 845 United Nations Plaza ee Manhattan, New York, oo ku yaalla Avenue ugu horreeya ee u dhaxeeya 47 iyo 48 Street. Dhismuhu wuxuu bilaabmay 1999, dhismahana waxaa lagu dhameeyay 2001. Naqshad dhismeedka Booliska Marta Rudzka ee Costas Kondilis & Partners LLP Architects. Dhismaha dhismaha waa mitir 262 iyo Tower Tower-ka wuxuu ku yaal dabaqa 72 oo leh muraayad madow.
Trump Tower waa xafiis caan ah oo ku yaal magaalada New York ee ku yaala Fifth Avenue No. 725, oo ku taal geeska 56. waddada. Dhismaha isdhexgalka waxaa loo qaabeeyey naqshadeeye Derem Scutt (Swanke, Hayden Connell) kharashka maalgelinta Donald Trump. Dhammaystiray 1983, dhismuhu wuxuu leeyahay dabaqa 58 oo dhererkiisu yahay mitirka 202.
Trump Tower iyo Trump Towers waa magaca dhowr caansan, kuwaas oo ay leedahay oo ay gacanta ku Donald Trump, Trump Towers IstanbulTrump Towers AtlantaTrump Charlotte - munaaraddii loogu talagalay in badhtamaha magaalada CharlotteTrump Tower (Baku) Trump Tower (Manila) Trump Tower (New York) Trump Tower (Philadelphia) Trump Tower (Tampa) Trump Tower (White Babacyada) Trump Hotel International oo Tower (Chicago) - dhameeyey 2009Trump World Tower - New York CityTrump Towers Badda - si FloriděTrump Parc ee Stamford, Connecticut
Qodobka: Farshaxanka Heshiiska waa buug laga soo xigtay 1987 oo qayb ahaan loogu duubay xasuusiyo iyo buug ku saabsan horumarka shakhsi ahaaneed. Qorayaasha waxaa ka mid ah Donald Trump iyo saxafiga Tony Schwartz kuwaas oo ka shaqaynayay tan iyo 1985. Buugga ayaa helay 1. liiska darajooyinka New York Times ee buugaagta ugu-iibinta ah ee 51 sii waday toddobaadyo. Waxay ahayd buugii ugu horreeyay ee Trump ee la daabacay wuxuuna ka caawiyay inuu helo magaciisa oo lagu ogaado qoys kasta. Trump waxa ay ka soo xigatay iyada oo ah mid ka mid ah guulaheeda ugu weyn iyo buugeeda labaad ee ay jeclaan lahayd Kitaabka Quduuska ah.
Eric Frederick Trump (* 6 January 1984 New York) waa ganacsade Maraykan ah iyo wiilkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisii ​​ugu horeeyay, Ivana Trump. 2007, wuxuu aasaasay 2016 oo wuxuu hogaamiyay Eric Trump Foundation (Eric Trump Foundation). Wuxuu yahay madaxweyne ku xigeenka ururka "Trump Organization".
Marla Maplesová (* 27 1963. October Dalton) waa jisha Maraykan iyo xaaskiisa hore ee Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpa.Životopis waxa uu ku dhashay sida gabadhii wakiil shirkada guryaha Edward Stanley Maples oo lagu daydo Laura Ann Locklear. Waxay wax ka bartay Northwest Whitfield High School ee Tunnel Hill. 1983 waxay ku guuleysatay horyaalka Georgie. In 1986 iyada ugu horeeyay ee sida actarad kaalinta yar ee Kac film of Machines ah.
Mike Pence (* 7 June 1959) waa siyaasi Jamhuuriyadda Mareykanka ah iyo 48. Madaxweyne kuxigeenka Mareykanka. Intii u dhaxaysay 2013 iyo 2017, wuxuu u shaqeeyay guddoomiyihii gobolka Indiana. Markii hore, 2001 ilaa 2013 waxay ahayd mid ka mid ah ku-xigeennada ka socda Dawladdaan ee Golaha Wakiillada.
Covfefe waa ereyga laga yaabo inuu si qalad ah u isticmaalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee tweetka ka soo baxay 31. May 2017. Dhammaan tweet waxay ku qoran yihiin Ingiriisi: "In kasta oo ay si joogto ah ufiiriyaan saxafiyiinta saxaafadda" (inkastoo ay ka mid yihiin xayawaanka saxda ah ee joogtada ah). Waxaa muuqata in nasiib daro ku dhacday naanaysta tweet-ka ee lagu soo daabacay xisaabta Trump ee u muuqda qiyaastii saqda dhexe ee Washington waxaana la tirtiray lix saacadood ka dib. Dhanka kale, wuxuu noqday mid ka mid ah 2017's ugu caansanaa fiidiyowyadii markii dadku ku sheekeysteen oo ay ku tilmaameen wixii ay ula jeedeen.
Jared Kushner (* 10 January 1981, Livingston, USA) waa ganacsade Maraykan ah iyo ganacsade hantiyeed. Waa tifaftiraha New York Observer, xaaskiisu waa Ivanka Trump oo ah gabadha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Isagoo kaashanaya qaraabada kale, Kushner wuxuu xubin ka ahaa kooxda Trump si uu kor ugu qaado awoodda. Waxa uu ka caawiyay Trump in ololeha madaxweynanimada inuu qabto shirar muhiim ah, iyo sidii uu ula dhaqmay Orthodox Judaism wuxuu ka caawiyay inuu la xiriiro codbixiyayaasha Yuhuudda. 2017, Donald Trump wuxuu u magacaabay lataliyaha golaha ee Heshiisyada iyo Bariga Dhexe.
Mike Richard Pompeo (* 30 Diisembar 1963, Orange, Mareykanka) waa siyaasi Jamhuuriyadda Mareykanka ah. Sanadihii 2011 ee 2016 wuxuu xubin ka ahaa Golaha Wakiilada ee Gobolka Kansas. Waa taageere xisbiga Jamhuuriga ee Conservative Party.
Doorashadii Madaxweynaha Maraykanka ee 2016 ayaa dhacay Talaadadii, 8. Nofeembar 2016, sida 58. doorashada tooska ah ee Madaxweynaha Mareykanka. Muwaadiniintu waxay u codeeyeen codkooda si ay u doortaan musharaxiinta, ka dibna loo doorto in ay doortaan xulafad doorasho 45. Madaxweynaha iyo 48. Madaxweyne kuxigeenka Mareykanka.
iskaashi Transpacific (English Partnership Trans-Pacific, ama Heshiiska Ingiriisi Partnership TPP Trans Pacific, TPPA) waa heshiis dhexaaya on aag ganacsiga ee ka dhexeeya Dawladaha xubnaha ka ah, kaas oo la wada xaajooday dhowr sano oo wadahadal ka dib markii maamulka Maraykanka Obama in 2015 oo saxiixay bishii April ee sannadka soo socda. Ma heshiisyada ku lug Japan, Brunei, Malaysia, Vietnam, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile, Peru iyo United States. Heshiiska ayaa waxaa loogu talagalay, tusaale ahaan, by yaraynta kastamka si kor loogu qaado koritaanka iyo in si qotodheer xiriirka dhaqaale, laakiin sidoo kale inay soo bandhigto heerarka shaqada uniform. Donald Trump ayaa saxiixay 23. Janaayo 2017 oo amar ku bixiyay in laga baxo heshiiska. Ma uusan ansaxin Golaha Congress.
"Snake" waa hees ay qortay Oscar Brown oo ah sheeko 1963. Fanaanada 1968 Al Wilson ayaa caan ku ahayd. Singl, oo uu B-ka ahaa heesaha "Willoughby Brook," kuma guulaysano badan Maraykanka, laakiin wuxuu ku dhuftay Boqortooyada Ingiriiska. Bishii Sebtembar 1975 waxay u fuulaysay 41. UK Singles Chart. Ganacsatada Donald Trump ayaa akhrinaya qoraalka gabaygan iyada oo qayb ka ah musharaxa madaxweynenimada si uu u caddeeyo aragtidiisa ku saabsan dhibaatada qaxootiga ee ku wajahan qaabka dagaalka Sokeeye ee Suuriya.
Frederick Christ Trump Sr. (11 Oktoobar 1905 - 25 June June 1999, oo sidoo kale loo yaqaano Fred Trump) wuxuu ahaa hanti-hanti maguuran oo Maraykan ah iyo deeq-bixiyeyaasha ugu badan ee ku shaqeeya New York City. Waa aabaha 45. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
40 Wall Street waa cinwaan ku yaal New York, kaas oo ka muuqda dhismo qorrax ah oo xaruntiisu tahay Bankiga Manhattan Company kadib markii la dhammeeyo. Dabadeed, waxa loo yaqaan magacaas. Markii kireystihii ugu horeeyay uu ku biiray Baanka Qaranka ee Chase, waxaa la aasaasay Chase Manhattan Bank. Maanta, dhismaha cirifka ayaa loo yaqaan 'Trump Building', ka dib dib u dhiska 1996, kaas oo uu maalgeliyey milkiilaha cusub - Donald Trump. 1998, waxaa lagu taxay mid ka mid ah jiidashada magaalada magaalada. Waxay hadda tahay dhismaha lixaad ee ugu dheer magaalada New York.
Twitter waa shabakad bulsho iyo bixiye microblog kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay soo diraan oo akhriyaan jadwalka ay soo diraan dadka kale, oo loo yaqaano tweets. Tarjumaadda "twitter" waa "shakiyo", "shakiyo", "shakiyo".
Jefferson Beauregard KAL-III (24. 1946 December) waa siyaasi ah American iyo qareen. In February 2017 waxaa loo magacaabay Wasiirka Garsoorka ee dowladda Mareykanka Donald Trump. In 1997 si 2017 sannadood ayuu ahaa Senator ka mid ah Congress Maraykanka ka gobolka Alabama. Wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga. Tan iyo sanadkii la soo 1981 1993 sidoo kale lagu qabtay jagada xeer-ilaaliyaha Maraykanka ee Degmada Koonfurta ee Alabama. In 1986 ee degmada isla guuldareysteen magacaabay garsooraha maxkamadda degmada ee degmada. sano 1994 uu doortay wasiirka caddaaladda ee Alabama, 1994 ayaa la doortay, Senator Maraykan ah, dib loo doortay sannadihii ugu 2002, 2008 iyo 2014. Intii uu talada hayey ee Congress Kulamo uu tixgeliyo mid ka mid ah xubnaha ugu muxaafidka ah ee Senate Mareykanka.
Musharaxa Madaxwaynaha wuxuu ku jiraa siyaasad qof ah oo go'aansaday inuu codsado xafiiska madaxweynaha, wuxuu fuliyay shuruudo sharci ah wuxuuna qaatay tallaabooyinka loo baahan yahay. Dareenka dareenka ah, qofka loo magacaabay musharaxa madaxweynanimada ayaa loo aqoonsan yahay inuu yahay musharaxa madaxweynenimada. Shuruudaha shuruudaha, diiwaangelinta, badanaa xukuma sharciga, oo ay ku jiraan shuruudaha doorashada.
Xisbiga Dib-u-habeeynta ee Maraykanka ayaa ah xisbi siyaasadeed oo mucaarad ah oo ka shaqeeya dhulka Mareykanka. Waxaa la aasaasay by 1995 by Ross Perot, oo sheegatay in goobta siyaasadeed ee Mareykanka ay tahay mid adag oo aan waxtar lahayn, sidaas darteedna wuxuu u baahan yahay dibuhabaynta lagama maarmaanka ah.
Andrew G. McCabe sidoo kale Andy (* 1968) waa agaasimaha kumeel gaarka ah ee FBI. Waa agaasime ku-xigeenka 9. May 2017 wuxuu magacaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, wuxuu u shaqeeyaa 2. Augustine 2017, markii Agaasimaha Cusub Christopher A. Wray la dhaariyay, ayuu "ku noqday" isagoo ah Ku xigeenka Agaasimaha FBI.
Reinhold Reince Priebus (* 18 1972. March Dover, New Jersey) waa siyaasi ah American soo shaqeeyay laga bilaabo Janaayo ilaa July 2017 2017 sida oo agaasime ka ah Aqalka Cad (mid ah shaqaalaha Chief) in maamulka Madaxweyne Donald Trump. On 28. July 2017 ahaa out of this feature, madaxweynaha xilka ka bedelay hadda Xoghayaha Homeland Security (oo hore Marine Corps General) John Kelly. Inta u dhaxaysa 2011-2017 Priebus adeegay sidii Guddoomiyaha Guddiga Qaranka ee Jamhuuriga (Republican Guddiga Qaranka, RNC) ayaa run ahaantii ahaa madaxa maamulka xisbiga Jamhuuriga.
Trump International Hotel iyo Tower, oo sidoo kale loo yaqaan 'Trump Tower', ayaa ah xarun qurux badan oo ku taal magaalada Chicago, Illinois. Dhismaha waxaa lagu magacaabaa Donald Trump.
Paul Davis Ryan (29 Jan 1970 Janesville) waa siyaasi Maraykan ah oo ka danbeeya Xisbiga Jamhuuriga, oo ka shaqeeya 29. Oktoobar 2015 sida 62. Guddoomiyaha Golaha Wakiillada. 1999 waxa uu fadhiyay Wisconsin ee Golaha Wakiillada tan iyo XNUMX.
Janaayo - Axad Ugu yaraan dadka 39 ayaa lagu dilay markii ay weerareen meel lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada Turkiga ee Istanbul. 2. Janaayo - Isniinti Ugu yaraan 60 dhintay ayaa sheegatay dagaal qadhaadh oo ka dhacay xabsiga Brazil ee Manaus. Booliska Polish qabtay 28 dadka intii lagu jiray rabshado Elk, kaas oo sababay dilka wiil Polish in isku dhicii la dukaamada shaqaalaha Tunisian kebabu.3. January - Tuesday Brxit: Ivan Rogers, Safiirka Ingiriiska ee Midowga Yurub, iska casilay xafiiska. Megyn Kelly, oo faallo siyaasadeed ka bixisay Fox News, ayaa ku dhawaaqday inay rabto inay u guurto NBC.5. Janaayo - Khamiista Mételerium, oo hore loo tixgeliyey qayb ka mid ah perineumka, ayaa lagu sharxay suugaanta sayniska sida xubin cusub oo jidhka bini'aadamka ah. Hamza bin Ladin, oo ahaa wiilkii Usama bin Laden, ayaa waxaa ku liitay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka "liiska argagixisada caalamiga ah." 6. Janaayo - Jimce Ugu yaraan 33 ayaa lagu dilay xabsi ku yaal magaalada Brazil ee Boa Vista ee gobolka Roraima. Ciidanka Côte d'Ivoire ciidamadu waxay ku kaceen magaalooyinka Bouaké, Daloa iyo Korhogo. Ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay weerar ka Esteban Santiago-Ruiz hub semi-automatic garoonka diyaaradaha ee Fort Lauderdale-Hollywood Floridě.7. Jannaayo - Sabti Ugu yaraan dadka 40 ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Suuriya ee Azaz oo ku taal xuduuda Turkiga. Da'da 92, madaxweynihii hore ee dalka Portugal iyo ra'iisal wasaaraha Mário Soares. Janaayo - Axad Yeruusaalem waxaa jirey weerar gaari oo ay ku dhinteen saddex dumar ah iyo hal qof ayaa ku dhintay. Dadka kale ayaa ku dhaawacmay. 8. Jannaayo - Isniinta Isniintii da'da 9, dhaqdhaqaaqa dhaqanka Yuhuudda Zygmunt Bauman ayaa dhintay (sawiran). Muusikada La La Land waxaa lagu abaalmariyay abaalmarinta 91 Best Film Film. Sannadka abaalmarinta Golden Globe. In Northern Ireland dawladda ka dib wakiil ka ah Martin Wasiirka koowaad ee McGuinness (Sinn Fein) iska casilay uu funkci.74 dhacay. Jannaayo - Talaadadii kowdii koowaad ee askari Maraykan ah ayaa yimid Poland si ay u xoojiyaan garabka bariga ee Alliance North Atlantic taas oo qayb ka ah hawlgalka Atlantic (Atlantic Deal). Tani waa jawaabta Ruushka Ruushka ee Crimean iyo dagaalka ee Bariga Ukraine.
Christopher Asher Wray (* 17 December 1966) waa agaasimaha FBI. Sanadihii 2003 ee 2005 wuxuu u shaqeeyay Ku-Xigeenka Xeer-Ilaaliyaha Guud, wuxuuna mas'uul ka ahaa qaybta dambiyada ee hoos yimaada xukunka George W. Bush. Laga soo bilaabo 2005 ilaa 2017, wuxuu ahaa lammaane ka ahaa King & Spalding. 7. June 2017 Madaxweynaha Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu magacaabo Nobaye oo ah agaasimaha FBI. . Waxaa xaqiijiyay Senate 1. August 2017 oo leh 92 - 5., Dhaarta oo ay soo maraan 2. August 2017.
James N. Mattis (* 8 September 1950, Pullman, USA) waa siyaasi iyo horey u ahaanshaha US Marine Corps General. Wuxuu ahaa taliye sare oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ee Ciraaq iyo Afgaanistaan. Laga soo bilaabo Jannaayo, 2017 waxay haysaa post-ka Xoghayaha Guud ee Maraykanka ee Donald Trump.
On 12. Bishii Agoosto, 2017 waxaa lagu weeraray baabuur ku yaal Charlottesville, Virginia. 20 nin dhallinyaro ah ayaa gaari ku waday gaari ku dhexjiray koox mudaaharaad ah. Waxaa lagu eedeeyay dambiyo badan, oo ay ku jiraan dilka labaad ee dilka ah. Warbaahin ku saabsan dhacdadan ayaa ka hadlay weerarkii aan ula kac ahayn ama weerar argagixiso.
Miss Universe waa tartan caalami ah oo heer caalami ah oo sannad kasta la qabto tan iyo 1952. Waxay la tartamaysaa maareynta tartanka Miss World sida ganacsiga ugu muhiimsan ee nooca adduunka ah.
Boeing 757 waa diyaarad diyaaradeed oo matoor ah oo loogu talagalay xarumaha gaaban iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Markii ugu horeysay ee Boeing Model 757 ayaa la bilaabay duulimaadkii ugu horeeyay ee 19. Janaayo 1982 oo ka socda Madaarka Renton.
Inishturk (Irish Inis Toirc, oo macneheedu yahay jasiirad boor ah oo jilicsan) waa jasiirada gobolka Mayo ee gobolka Connacht ee Ireland. Jasiiradda waxaa si joogto ah u deggan 18. Juqraafiga ah ee Inishturk wuxuu ku yaalaa Atlantic Ocean, 14,5 ee galbeed ee xeebta Irland. Jasiiradda ugu dhow waa Caher Island oo aan deganayn, oo ku yaala inta u dhaxaysa Inishturk iyo Clare Island albaabka laga galo Clew Bay. Jasiirad kale oo weyn oo ku hareereysan biyaha Atlantic waa Inishboofin ee koonfur galbeed. Barta ugu sarraysa ee Inishturk waxay gaartaa mitirka 189.3 (joojinta 621.1). Xeebta galbeed ee jasiiradda waxaa ku yaal xeelado sare oo 100 ah.
Siyaasadaynta Sayniska waa hab lagu saameyn karo sayniska ee ujeeddooyinka siyaasadeed iyo kuwa kale ee bulshada. Taariikh ahaan, taniyo wakhtiyadii hore, sayniska ayaa lagu sameeyey amar siyaasadeed. Sida farshaxanka (farsamada). Tusaale ahaan, Archimedes waxay u shaqeeyeen King Hieron oo waxay abuurtay qalab dagaal. Xataa Leonardo da Vinci, marka lagu daro farshaxanka, waxay dhisteen farsamooyin milatari oo kala duwan (oo u shaqeeyay Medici ama Pope).
Catherine Smržová (* 26 1980. September ee Prague, Czechoslovakia) waa model ah Czech iyo ugu horeysay ee xilli-ciyaareedka Czech Republic 2002.Život In 2002 waxaa ka soo qaybgalay tartanka quruxda Czech Miss Czech Republic iyo kaalinta siduu kan hore kaalinta labaad-up. Ka dib markii Czech Republic waxaa matalayey ee finalka tartanka caalamiga qurux Miss World oo qaaday 7 meel. December 2002 ee London. Waxay ku guul daraysatay. Markaas uu ku matalayay dalka ee tartanka caalamiga qurux Miss Caalamka, kuwaas oo finalka lagu qabtay 3. June 2003 ee Panama. Waxay ku ridday 8. meel. Ka dib guul ee Caalamka Miss u duulay New York si ay u bartaan. At tartanka, waxay dareentay billionaire Mareykanka Donald Trump iyo iyada siiyo shaqo ee uu hay'adda.
Kevin Stephen "Steve" Bannon (* 27 1953. November, Norfolk, USA) waa ganacsade Maraykan ah oo siyaasi, yaqaanaa aragtiyihiisa aalladda midig, kuwaas oo lagu qabtay post ee la taliyaha iyo Qolyihii istiraatijiyadda oo madax ka ah Madaxweynaha Donald Trump dhexeeya January iyo August 2017.
Allan Lichtman (* 4. 1947 April) waa professor Maraykanka ee taariikhda siyaasadeed ee ka dhiga jaamacadda American ee Washington, DCJe geynta wada yaqaan "toban Furayaasha", taas oo tan iyo markii 1984 mar walba si sax ah u saadaaliyey natiijada voleb.Třináct Madaxweynaha Maraykanka geynta ee muhiimka ah "toban Furayaasha "ku salaysan waxbarasho ee doorashada Maraykanka madaxtooyada tan iyo markii 1860. Lichtman waxay soo kala tilmaameen in buugaagta uu Thirteen Furayaasha The in Madaxtooyada (The iyo toban Furayaasha in Madaxtooyada) iyo Furayaasha si Aqalka Cad (The Furayaasha Aqalka Cad). Its horumarinta ayaa gacan saar la leeyihiin xisaab Ruushka iyo seismologist Vladimir Keilis-Borok (1921-2013), taas oo markii hore la macaamilooday dhulgariir saadaalinta.
Hotel Plaza (English Plaza Hotel) waa hotel raaxo devatenáctipatrový yaalla meel u dhow Central Park South in Manhattan, New Yorku.Rozměry iyo goobta hotel waa dheer sare 76 122 m m. Waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee Grand Army Plaza, kaas oo waxaa la dheefay magaca. dhinaca bari ee Grand Army Plaza kala Manhattan ee thoroughfare Fifth Avenue. Tan iyo 1988 gaar Donald Trump. Trump iibsaday hotel ee 407,5 milyan oo doolar oo hadda [goorma?] Qiyaastii 824 million dollars.
Saddexda Dal ee Seas waa urur aan rasmi ahayn oo laba iyo toban dal oo ka mid ah Bartamaha iyo Bariga Yurub. Hadafkeedu waa inuu wadashaqeyn la yeesho waddamada kala duwan iyo in lagu xiro gobolka waqooyi-koonfur.
Waterboarding waa farsamo loo isticmaalay in uu ku qasbo qirashada ama macluumaad. Waxa loo adeegsaday lagu jiro xaalkaas Spain (14 Century.) Oo maanta (2009) waxaa loo arkaa Amnesty International in ay nooc ka mid ah jirdilka, halka Madaxweynihii hore ee ku-xigeenka Maraykanka Dick Cheney waxa loo yaqaan "il faa'iido macluumaadka" iyo McCarthy, oo agaasime ka ah Xarunta Dagaalkii iyo xeer ilaaliyihii hore ee ah in Mareykanka , qaadataa aragtida ah in waterboarding aan u dhaco aawadeed gudahood lagu qeexaa jirdil.
James Brien IMAN, Jr. (* 14 1960. December, Yonkers, New York, USA) waa qareen ka Maraykanka, Agaasimihii hore ee FBI iyo Ku-xigeenka hore ee Wasiirka spravedlnosti.Mládí, waxbarashada iyo rodinaNarodil in Yonkers, New York, laakiin ku koray Allendale, New Jersey. ka Highlands Dugsiga Sare ee Northern Regional Wuxuu ka qalin jabiyay in Allendale oo ka College of William iyo Maryan oo ka qalin ee kimisteriga iyo diinta. Uu sha final falanqeeyay fiqi deeqsi ah Reinhold Niebuhr iyo televangelist muxaafidka Jerry Falwell, ee xooga saara ay aaminsan yihiin wax caadi ah in tallaabo dadweynaha. Tan iyo 1985 waa kii of a shahaado Juris Doctor ka dib ka qalin dugsiga sharciga ee Jaamacadda Chicago.
Aqalka Cad ayaa ah goobta iyo goobta shaqada ee Madaxweynaha Mareykanka, oo uu qoyskiisu ku nool yahay halkaa, waa dhismo qaabeyn ah oo udhaxeeya Georgian ah. Waxay ku taallaa Washington, DC, 1600 Pennsylvania Avenue NW. Ereyga Aqalka Cad ayaa badanaa loo isticmaalaa maaha kaliya dhismaha laftiisa laakiin sidoo kale maamulka madaxweynaha Mareykanka. Guriga ayaa ka weynaa 200 sano, madaxweynihii ugu horeeyay ee ku noolaa Aqalka Cad ayaa ahaa John Adams, oo ahaa madaxweynaha labaad ee Maraykanka. Dhismaha Aqalka Cad wuxuu ka bilowday 13. Oktoobar 1792 iyo dayactir badan ayaa la sameeyay tan iyo markaas. Waxaa markii ugu horeysay lagu sawiray Warqadda British-American War (sidoo kale Dagaalkii Sanadka 1812, Dagaalkii Labaad ee Maraykanku ahaa ee Madax-bannaanida), halkaa oo ah Aqalka Cad ee Ingiriiska 24. 1814 dab ka kacay August. Xaqiiji weyn ayaa ka dhacay 1961, markii Jacqueline Kennedy iibsaday waxyaabo taariikhi ah oo cusub oo cusub. Gurigii oo idil wuxuu ku guuleystey in uu cusbooneysiiyo hal sano. Waxay abuurtay matxaf taariikhda Maraykankan ah iyada oo la soo ururiyay sawirrada madaxweynaha. Aqalka Cad wuxuu ka kooban yahay rugta caafimaadka iyo ilkaha, studio-ga, qolka biyaha, hudheelka gudaha iyo hoyga ka soo horjeeda bambooyinka nukliyeerka. 2017 ayaa ku noolayd 45 tan iyo bishii Jannaayo. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Aftida ku jirta xubinimada United Kingdom ee Midowga Yurub waxay ahayd aftida lagu qabtay Boqortooyada Ingiriiska iyo Gibraltar by 23. June 2016, oo muwaadiniinta ay muujiyeen aragtidooda ku saabsan xubinimada gobolka ee Midowga Yurub. Cod aqlabiyad ah waadaxa ah ee votes 17,411 million (51,9%) ee brexit waxa loogu yeero (ka Ingiriisida ah ee "British" iyo "exit" bixitaanka British) codeeyay, sidaas tago Midowga. Kuwa ka soo horjeeda xubinimada Ingiriiska ee Midowga Yurub (EU) waxay ku guuleysteen 308 degaannada 382. Codbixiyayaashu waxay doorteen inay ka baxaan ka dib markii 43 sano ee xubinimada Midowga Yurub.
Dee Elizabeth "Betsy" DeVosová (nepřechýleně Betsy DeVos, nee Prince, * 8. 1958 January) waa siyaasi ah oo American ah Xisbiga Jamhuuriga ah, ka 7. Febraayo 2017 Wasiirka Waxbarashada ee Dawlada Donald Trump. Waxay bedeshay John King Jr. oo ka socda dawladda Barack Obama.
Jerome Hayden Powell (* February 4. 1953, Washington DC) waa qareen American iyo xubin ka mid ah Board of Governors of System Reserve Federaalka (Board of Governors Guddiga Reserve Federaalka, soo gaabiyo badanaa "Caal"), Maraykanka, taas oo u adeegta tan 2012. On 2. November 2017 magacaabay Madaxweynaha Donald Trump Powell guddoomiyaha Reserve Janet Federaalka Yellen bedelka. Haddii la xaqiijiyay by Senate Mareykanka, Powell befriends uu maalin cusub 1 booska. Febraayo 2018.
Paul D. Miller waa nin aqoonyahan ah American, oo ah falanqeeye CIA, blogger iyo taliyaha hore in Madaxweynaha George W. Bush iyo Barack Obama degaanka ee Afghanistan ee Golaha Amniga Qaranka, kaasoo ku 2012 guulaysatay in la saadaaliyo faragelinta Ruush ee Ukraine, kaas oo bilaabay in 2014. Sidoo kale waa Director-xigeenka William P. ku Clements, Jr. Xarunta Amniga Qaranka ee Jaamacadda Texas ee Austin, saynisyahan siyaasadeed ee hay'adaha cilmi-baarista rand Corporation, sarkaal sirdoonka Maraykanka hore iyo halyeeyga ah ee dagaalka Afqaanistaan.
Donald John "Don" Trump Jr. (* 31 December 1977 New York) waa ganacsade Maraykan ah. Wuxuu yahay cunugga ugu horreeya ee 45. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, iyo qaababka Czech ee Ivana Trump. Waxa uu haatan la shaqeynayaa walaashiisa, Ivanka Trump iyo walaalkiis Eric Trumpe, oo ah madaxweyne ku xigeenka madaxa shirkada Trump Organization, oo uu dhisay aabihiis.
Marie Ivanka Trump (* 30 1981. October ee City New York, New York, United States) waa ganacsato ah American iyo modelka.Svému aabbihiis Donald Trump caawiyay in uu olole ku 2016 doorashada madaxweynaha. Waxay sidoo kale u dhaqantay xubin ka tirsan kooxda 16 ee maamulka maamulka Baarlamaanka ee Trump.
Ivana Trumpová, oo dhashay Zelníčková, (* 20 Febraayo 1949 Zlín) waa ganacsade Czech ah oo ganacsade ah, oo horey u ahaa ciyaaryahankii hore. Sanadihii 1977-1991, Donald Trump wuxuu ahaa haweeneydii ugu horreysey ee ganacsadaha iyo madaxweynihii danbe ee Mareykanka.
Ariana Tiffany Trump, magaca dhalashada Ariana Tiffany Trump (* 13 1993. October West Palm Beach, Florida) waa celebrity Internet American iyo gabadhii madaxweynaha of United States ee Donald Trump iyo xaaskiisa labaad, Marly Maplesové.
Melania Trump, nepřechýleně Trump, magaca dhalashada Melanija Knavs, germanised: Melania Knauss (. * April 26 1970 Novo Mesto) waa model hore ee Slovenia, dahabka naqshadeeye iyo saacado, taas oo ka January 2017 kaalin ee First Lady of United States of America sida naagtii Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Trump macnaheedu noqon kartaa: příjmeníDonald Trump (* 1946) - Ganacsade American, actor iyo qoraa, aabbihiis Ivanka 45. Madaxweynaha USAIvana Trump (* 1949) - ganacsato American, hooyadiis IvankyDonald Trump Jr. (* 1977) - Ganacsade American, ina Donald iyo IvanyIvanka Trump (* 1981) - model American iyo ganacsato, gabadhii Donald iyo IvanyKelly Trump (* 1970) - Jarmal pornoherečkaJudd Trump (* 1989) - ciyaaryahan British snookerujiný významTrump Tower - walxaha badan ( hotels, todobo)